Qarax gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyey oo Muqdisho ka dhacay – STAR FM SOMALIA
Qarax gaari waxyaabaha Qarxa laga soo buuxiyey oo Muqdisho ka dhacay
Wararka aan ka helayno Xaafada Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax gaari.
Gaarigaan oo waxyaabaha Qarxa ka buuxeen, islamarkaana ciidamada ammaanka ay heleen macluumaadka ku saabsan gaarigaan, ayaa waxaa la qabtay ninkii waday ka hor inta uusan qarxin gaariga.
Ciidamada ammaanka ayaa markii ay qabteen ninkii waday gaarigaasi, waxaa qarxay Baabuurka, waxaana ku dhaawacmay dad gaaraya Afar ruux oo shacab ah oo ka agdhawaa goobta Baabuurka uu ku qarxay.
Gaariga ayaa wuxuu ku qarxay Nawaaxiga Masaajidka Macalin Dhiblaawe ee Xaafada Suuq Bacaad ee Degmada Yaaqshiid.
Ciidamada ammaanka ayaa waxa ay gacanta ku hayaan ninkii watay gaarigaasi oo ciidanka NISA ay baaris ku hayaan, inkastoo aanan la ogeyn halka uu ahaa Bartilmaameedka gaarigaasi.
Goobta gaariga uu ku qarxay ayaa hada waxaa ku sugan Saraakiisha ciidamada Nabad Suggida oo kormeer ku tagay goobtaasi.
Xildhibaanada Hirshabelle oo doortay Guddoomiye KMG ah